သိပ္ပံကိုယ်စားလှယ်။ 2017 ဇန်နဝါရီ 30; 7: 41742 ။ Doi: 10.1038 / srep41742 ။
Kim က M ကို1, Lee က TH2, Choi JS1,3, Kwak YB2, ဟွမ် WJ2, ကင်မ် T က2, Lee က JY3,4, Lim ကဂျေအေ3, ပန်းခြံက M3, ကင်မ် YJ3, ကင်မ် SN1, Kim က DJ သမား5, Kwon JS1,2,4.
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (IGD) နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ (OCD) ကို Impulse နှင့် compulsive အတိုင်းအတာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းကိုယ်စားပြုသော်လည်း, နှစ်ခုမမှန်တုံ့ပြန်မှုတားစီးအတွက်ဘုံ neurocognitive လိုငွေပြမှုမျှဝေပါ။ သို့သော် IGD နှင့် OCD အကြားပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ neurophysiological features တွေအတွက်တူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုလုံလုံလောက်လောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးကြပြီမဟုတ်။ စုစုပေါင်း IGD နှင့်အတူ 27 လူနာ OCD နှင့် 24 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ 26 လူနာ (HC) ဘာသာရပ်များ electroencephalograph အသံသွင်းနဲ့ Go ကို / NoGo task ထဲမှာပါဝင်ခဲ့။ သီးခြားစီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အခြေအနေများနှင့်အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် N2-P3 ရှုပ်ထွေးသော Go ကိုနှင့် NoGo အခွအေနေစဉ်အတွင်းရူးနှမ်း။ ဗဟိုလျှပ်ကူးပစ္စည်း site ကိုမှာ NoGo-N2 အောင်းနေချိန်ဟာ HC အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ် IGD အုပ်စုတွင်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့် Impulse ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုကျရိုကျလျှပ်ကူးပစ္စည်း site ကိုမှာ NoGo-N2 လွှဲခွင် IGD လူနာထက် OCD လူနာအတွက်သေးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကြာရှည် NoGo-N2 အောင်းနေချိန် IGD အတွက်ရို Impulse တစ်အမှတ်အသားအဖြစ်ဆောင်ရွက် NoGo-N2 လွှဲခွင် compulsive နှငျ့ ပတျသကျ. IGD ထံမှ OCD အကြားတစ်ဦး differential ကို neurophysiological အင်္ဂါရပ်ဖြစ်နိုင်သည်လျှော့ချစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ Impulse နှင့် compulsive များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း biomarker ဖြစ်ရသော IGD နှင့် OCD အတွက်ပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ပထမဦးဆုံး differential ကို neurophysiological Correlate, သတင်းပို့ပါ။
Doi: 10.1038 / srep41742
သမိုင်းကြောင်းအရ, စိတ်ရောဂါရောဂါခွဲခြားမော်ဒယ်များတစ်ခုတည်းအတိုင်းအတာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းပေါ်ထကြွလွယ်သောပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများထားရှိပါပြီ1။ အများစုမှာကိုယ်စားလှယ်ထကြွလွယ်သောရောဂါအဓိကဝိသေသအဖြစ်ချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်များအတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်ကိုပြသရာထိုကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (PG) သို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအဖြစ်စွဲလမ်းမမှန်, ဖြစ်ကြသည်2,3။ OCD အတွက် compulsive မဟုတ်ဘဲကျပုံစံဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါ (OCD) အတ္တ-dystonic မကြာခဏ compulsive ရောဂါအများဆုံးဂန္ပုံစံစဉ်းစားထားပါတယ်, နှင့်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်4,5။ ဒီနေသော်လည်းမကြာသေးမီအစီရင်ခံစာများ Impulse နှင့် compulsive တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးမျိုးသောစိတ်ရောဂါအခြေအနေများ, ကွဲပြားဒီဂရီ, အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း orthogonal အချက်များဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုတားစီး, ဦးနှောက် circuitry နှင့် comorbidities အတွက်လိုငွေပြမှုအဖြစ်ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါအကြားတူညီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ6,7။ မြင်ကွင်းကဤအချက် မှစ. , American Psychiatric Association တစ် Diagnostic အသစ် compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါ (OCRD) အမျိုးအစားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ,5ပေးအပ်th ထကြွလွယ်သောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါများအတွက်တူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်ထပ်မံမျိုးစုံအမြင်များကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်သည့်အတွက်ထုတ်ဝေ (DSM-5),6.
အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ (IGD) PG အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းဆင်တူအလုပ်လုပ်တဲ့ချို့ယွင်းသည့်ကြားမှအင်တာနက်ဂိမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုအမူအကျင့်စွဲ, အဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်8,9။ အင်တာနက်နာမည်ကျော်နှင့်၎င်း၏ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုနှင့်အတူ IGD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအရေအတွက်တိုးပွားလာခဲ့ကြပြီးအမျိုးမျိုးသောစိတ်ရောဂါ comorbidities ဆီသို့သဘောထားတွေကိုပြသ10,11,12,13။ IGD အတွက်ထွန်းသစ်စလက်တွေ့အကျိုးစီးပွားထင်ဟပ်, DSM-3 (လွန်မြောက်ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် & Models) ၏အပိုင်း5အနာဂတ်သုတေသနအားပေးဖို့အဆိုပြုထားအဖြေရှာတဲ့စံများစာရင်းကိုနှင့်အတူ, ဒီအခွအေနေပါဝင်သည်14။ Impulse နှင့် IGD အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုပျက်ကွက်ထိုကဲ့သို့သော, အမူအကျင့် electrophysiological နှင့် functional neuroimaging Paradigm အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ, အသုံးပြု. အကြံပြုခဲ့ကြ15,16,17။ ချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးလည်း obsessive-compulsive လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်မတတ်နိုင်သောထိပ်တန်း-Down စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ, OCD အစီရင်ခံထားသည်18,19။ တုန့်ပြန်တားစီးအတွက်လိုငွေပြမှုတိကျတဲ့လုပ်ရပ်လုပ်ဆောင်ဖို့ shared တိုက်တွန်းဖို့, Impulse သို့မဟုတ် compulsive ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါ20,21။ ထို့ကြောင့် IGD နှင့် OCD အတွက်ပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ neurobiological Correlate (s) ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက် Impulse နှင့် compulsive ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
Go ကို / NoGo တာဝန်များကိုအတွက် N2 နှင့် P3 ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာ (ERP) အစိတ်အပိုင်းများကိုတုန့်ပြန်တားစီး၏ neurophysiological ဆက်စပ်မှုအဖြစ် conceptualized ပြီ22။ ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ဦး NoGo နှိုးဆွဖို့တုံ့ပြန်မှုကိုသိုထားသော NoGo-N2 နှင့် -P3 inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏ဖြစ်စဉ်ကိုထင်ဟပ်ကြောင်းညွှန်ပြတဲ့ Go ကိုနှိုးဆွတုံ့ပြန်ပါဘူးထက်ပိုကြီးတဲ့ N2-P3 ရှုပ်ထွေးထုတ်လုပ်23။ ယခင်သုတေသန NoGo-N2 inhibitory ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေး၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ထင်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်24,25,26။ အခြား ERP အစိတ်အပိုင်း, NoGo-P3, နှစ်ဦးစလုံးဟာမှတ်ဥာဏ်နဲ့မော်တာ domains များအတွက် inhibitory လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ပိုင်းစင်ပေါ်မှာကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ27,28။ ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံး NoGo-N2 နှင့် -P3 အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းလွှဲခွင်အောင်မြင်သောတားစီးတစ်ခုသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့လိုအပ်သောပုဂ္ဂလဒိဋ္အားထုတ်မှုတစ်ခုခုကိုတစ်အမှတ်အသားအဖြစ်အကြံပြုထားသည်နှင့်အောင်းနေချိန်အဆုံးစွန်သောရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားထားသည်22,29.
တစ်ဦး Go ကို / NoGo ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီး IGD အတွက်တုန့်ပြန်တားစီးပေါ်မှာတော်တော်များများလေ့လာမှုများရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းရလဒ်တွေကိုလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ကြပြီမဟုတ်။ နှစ်ဦးကိုလေ့လာမှုများအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုသူ NoGo-N2 amplitude ဖြစ်ကောင်းကြောင့်ဆက်စပ် Impulse တစ်ဖြန်ဖြေအကျိုးသက်ရောက်မှုရန်, လျှော့ချခဲ့အကြံပြုသည်။ အဘယ်သူမျှမဆက်စပ်သည်ဤလေ့လာမှုများအတွက် NoGo-N2 လွှဲခွင်နှင့် Impulse မဆိုအတိုင်းအတာအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ကတည်းကသို့သော်, IGD ဘာသာရပ်များအတွက်ရို Impulse ၏အမှတ်အသားများဖော်ထုတ်မရနိုင်တော့17,30။ ဆနျ့ကငျြနှစ်ခုကတခြားလေ့လာမှုတွေအလွန်အကျွံဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများကိုတိုးမြှင် NoGo-N2 amplitude အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်တားစီးပျက်ကွက်မှုအတွက်အစားထိုး hyperactivity အဖြစ်ရလဒ်များအနက်31,32။ ဤရွေ့ကားရှေ့နောက်မညီမှုကြောင့် NoGo-N2 လွှဲခွင်အပြောင်းအလဲတချို့၏ညှနျကွားတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုလူသိများသောလေ့လာမှုများတို့တွင်တာဝန်အခက်အခဲအတွက်အပြောင်းအလဲမှဖြစ်မည်အကြောင်း (ဆိုလိုသည်မှာတိုးမြှင်သို့မဟုတ်လျော့နည်းသွား)33။ NoGo-P3 သည် Dong သာလေ့လာမှုနှင့်စပ်လျဉ်း et al။ NoGo-P3 လွှဲခွင်နှင့်အောင်းနေချိန်များတွင်သိသာထင်ရှားသောအုပ်စုတစ်စုခြားနားချက်အစီရင်ခံ17။ Go ကို / NoGo တာဝန်များကိုသို့မဟုတ် Stop Signal လုပ်ငန်းများ (SST) ကို အသုံးပြု. OCD လူနာအတွက်ယခင် ERP လေ့လာမှုများတုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့် compulsive အကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်။ Kim က et al။ နံရံပစ်ကစားနည်း-အလယ်ပိုင်းက်ဘ်ဆိုက်များမှာ NoGo-N2 amplitude လျှော့ချခဲ့သည်နှင့်အဆိုး obsessive-compulsive လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြကြောင်းပြသ18။ အခြားလေ့လာမှု, Hermann အတွက် et al။ OCD လူနာ (Y ကို-BOCS) ရမှတ်ဟာ NoGo အခွအေနေစဉ်အတွင်းတိုကျရိုကျလှုပ်ရှားမှုလျှော့ချခဲ့ကြောင်းနှင့် anterior အဆိုးယေးလ်-Brown က obsessive compulsive စကေးဆက်နွယ်နေကြောင်းခံခဲ့ရကွောငျးဖျောပွခဲ့34။ ဂျိုဟန် et al။ , အခြားတစ်ဖက်တွင်, Stop-N2 လွှဲခွင် SST စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း OCD လူနာတိုးပွားလာခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ35။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လဲ့ et al။ တိုးမြှင့ Stop-N2 လွှဲခွင်မသက်ဆိုင်လက္ခဏာအတိုင်းအတာ၏ OCD လူနာတစ်ဦးယေဘုယျအင်္ဂါရပ်နှင့် OC လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းအစီရင်ခံ36.
အဆိုပါ Impulse နှင့် compulsive ဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ IGD နှင့် OCD ၏ pathophysiological နှင့် neurobiological ယန္တရားများဖော်ထုတ်အတွက်ကြီးထွားလာအကျိုးစီးပွားနေသော်လည်းယနေ့အထိမျှလေ့လာမှုကိုတိုက်ရိုက် OCD နှိုင်းယှဉ် IGD အတွက်တုန့်ပြန်တားစီး၏ neurophysiological Correlate (s) ကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ထို့အပွငျ IGD ဘာသာရပ်များအပါအဝင်လေ့လာမှုများလေ့လာမှုများအကြားတာဝန်ရှုပ်ထွေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်ရသောကိုက်ညီမှုရလဒ်များကို, အစီရင်ခံတင်ပြကြပြီ ထို့ပြင်, Impulse မရှိသိသာ neurophysiological Correlate ဖော်ထုတ်ထားပြီး17,30,31,32။ လက်ရှိလေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ Go ကို / NoGo တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း OCD နှိုင်းယှဉ် IGD ၏တုံ့ပြန်မှုတားစီးအတွက်တူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အမူအကျင့်များနှင့် neurophysiological နှစ်ဦးစလုံးရှုထောင့်စေ့အောင်တိုင်းနှင့် ERP တုံ့ပြန်မှုအပေါ်တာဝန်ရှုပ်ထွေးမှုမဆိုဖြစ်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက်တန်းတူအခက်အခဲ၏တာဝန်များကိုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ် OCD နှင့်အတူ IGD နှင့်လူနာများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ, တုံ့ပြန်မှုတားစီးအလားတူလိုငွေပြမှုကိုပြသမယ်လို့တွေးဆ။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော် Impulse နှင့် compulsive မှလေးစားမှုနှင့်အတူမမှန်အကြားကွဲပြားခြားနားသော neurophysiological features တွေနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ IGD သို့မဟုတ် OCD အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မဆိုပျက်ကွက်, မျှော်မှန်းထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီပထမဦးဆုံး IGD နှင့် OCD အတွက်တုန့်ပြန်တားစီး၏ကွဲပြားခြားနားသော neurophysiological ဆက်စပ်မှု၏စုံစမ်းစစ်ဆေးအစီရင်ခံသည်။ တွေးဆအမျှ IGD နှင့် OCD ပါဝင်သူနှစ်ဦးစလုံး IGD နှင့် OCD အဖွဲ့များအမူအကျင့်အဆင့်မှာတုံ့ပြန်မှုတားစီးအတွက်အခက်အခဲပြသကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, NoGo အခြေအနေ (ကော်မရှင်၏အမှားအယွင်းများ) တွင်တိုးချဲ့ဖွင်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ neurophysiological တွေ့ရှိချက်နှင့် ပတ်သက်. အားလုံးသုံးအုပ်စုများပိုကြီး N2-P3 amplitude နှင့် Go ကိုအခြေအနေထက် NoGo အတွက်မဟုတ်တော့ N2-P3 latency ပြသခဲ့သည်။ ဗဟို site ကိုမှာနှောင့်နှေး NoGo-N2 အောင်းနေချိန်အလယ်အလတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ HCs နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ IGD အုပ်စုတွင်တွေ့နှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းစွဲပြင်းထန်မှုများနှင့် Impulse ရမှတ်များနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုကျရိုကျ site ကိုမှာ NoGo-N2 လွှဲခွင် IGD တစ်ဦးချင်းစီနှိုင်းယှဉ် OCD လူနာလျှော့ချခဲ့သည်; သို့သော်အဆိုပါတိုကျရိုကျ site ကိုမှာ NoGo-N2 လွှဲခွင်အကြားဆက်စပ်မှုနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive လက္ခဏာပြင်းထန်မှုသိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ပေ။
bis-11 ရမှတ်များအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း, IGD ဘာသာရပ်များအတွက်အုပ်စုများအကြား, Impulse ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုပြသ37,38။ အဆိုပါ NoGo ခွအေနအေအတွက် N2-P3 ရှုပ်ထွေးသော၏ latency ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာတုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့လိုအပ်သောသိမြင်ဝယ်လိုအားအဖြစ်မှတ်နေသည်29။ Benikos et al။ NoGo-N2 လွှဲခွင်တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့တိုးမြှင့်တာဝန်အခက်အခဲနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူတိုးမြှင့်ခဲ့သည်ကြောင်းအစီရင်ခံ33။ ဒါဟာအစပြပွဲပြောင်းလဲ NoGo N2-P3 ရှုပ်ထွေးသော, ထိုကဲ့သို့သောအာရုံကို-လိုငွေပြမှုနှင့် hyperactivity ရောဂါ, နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့် psychopathy အဖြစ်မြင့်မားတဲ့ Impulse နဲ့စိတ်ရောဂါအခြေအနေများ, ပြသထားသည်39,40,41။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ NoGo-N2 လွှဲခွင်ဟာ shared inhibitory ထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှုရှိနေသော်လည်းဤနှစ်ခုလူဦးရေအကြား Impulse နှင့် compulsive ၏ neurophysiological ဆက်စပ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်အကြံပြုခြင်း, OCD လူနာထက် IGD တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုမိုကြီးမားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, IGD တစ်ဦးချင်းစီအတွက် NoGo-N2 အောင်းနေချိန် IGD ဘာသာရပ်များ, အရှင်ပိုပြီးသိမြင်အရင်းအမြစ်များကိုလိုအပ်အစောပိုင်းအဆင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်အတူအခက်အခဲရှိခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ, HC ဘာသာရပ်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်နှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပွငျ IGD နှင့် Impulse ၏ပြင်းထန်မှုဗဟိုနေရာတွင် NoGo-N2 အောင်းနေချိန်နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်း, IGD ဘာသာရပ်များအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုပျက်ကွက်မှုကြောင့်သူတို့၏မြင့်မား Impulse ရန်, တုံ့ပြန်မှုတားစီးဘို့သိမြင်ဝယ်လိုအားတိုးမြှင့်ဖို့ related စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
ယခင်လေ့လာမှုများ OCD လူနာစွဲလူနာနှင့်မတူဘဲတစ်ဆုလာဘ်နှောင့်နှေးနေတဲ့အတော်လေးထိန်းသိမ်းထားစွမ်းရည်ကိုပြသသောကွောငျ့ OCD အတွက်ထပ်ခါတလဲလဲအပြုအမူတွေ, ထကြွလွယ်သောထက်ပို compulsive ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်42,43။ အလားတူပဲကျနော်တို့ IGD ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ် OCD လူနာအတွက်လျော့နည်းထင်ရှားတဲ့ Impulse တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, OCD လူနာ compulsive အပြုအမူတွေ OCD အတွက် NoGo-N2 လွှဲခွင် (s) ကိုတားစီးကြောင်းတိုကျရိုကျဒေသ (s) တွင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါညွှန်း, IGD တစ်ဦးချင်းစီထက်တိုကျရိုကျ site ကိုမှာသေးငယ် NoGo-N2 amplitude ပြသ18။ ယခင်လေ့လာမှုများ၏အရင်းအမြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရလဒ်များကိုမှအဆိုအရ NoGo-N2 အစိတ်အပိုင်း medial orbitofrontal နှင့် cingulate cortical ကနေအစပြု22,44။ ဤရွေ့ကားဒေသများအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးလေ့လာမှုအတွက်တုန့်ပြန်တားစီး၏အာရုံကြောဆက်စပ်ဖြစ်သတင်းပို့ပြီ21။ OCD လူနာများတွင်မော်တာများနှင့်တုန့်ပြန်တားစီးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်သိ cortico-striato-thalamo-cortical ကွင်းဆက်၏ ventral သိမြင်မှုပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းဒေသများ obsessive-compulsive လက္ခဏာတွေများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်ဖြစ်အကြံပြုခဲ့ကြ45,46။ အတူတူကဤတွေ့ရှိချက်ယူခြင်း, OCD လူနာကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာတိုကျရိုကျ site ကိုမှာ NoGo-N2 လွှဲခွင်တိုကျရိုကျ cortical ဒေသများကကမကထပြုခဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများ neurophysiological ဆက်စပ်မှုအတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါလျှော့ချ။
ယခင်လေ့လာမှုများအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ရလဒ်များကိုမှဆန့်ကျင်, ငါတို့ OCD လူနာများနှင့် HC ဘာသာရပ်များအကြား NoGo-N2 လွှဲခွင်မျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုတွေ့18,34,35,36,47။ ယခင် NoGo- အပေါ်စာပေသို့မဟုတ် Stop-N2 OCD လူနာအတွက်ဒီဇိုင်းလေ့လာဖို့နှငျ့ ပတျသကျ. (တိုးလာသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွား) N2 လွှဲခွင်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ HCs ထက် OCD လူနာအတွက်သေးငယ် NoGo-N2 အစီရင်ခံကြောင်းလေ့လာရေး oddball ပါရာဒိုင်းမပါဘဲ Go ကို / NoGo တာဝန်အသုံးပြုချို့ယွင်းတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုအနက်18,34။ OCD လူနာအတွက်ပိုကြီးသော Stop-N2 အစီရင်ခံကြောင်းလေ့လာမှုများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရှုပ်ထွေးသော oddball ပါရာဒိုင်းသို့မဟုတ် SST နှင့်အတူ Go ကို / NoGo တာဝန်အသုံးပြုကျယ်ဝန်းတုံ့ပြန်မှုတားစီးဖျော်ဖြေအတွက်တိုးပွားလာကြောင်းသိမြင်ဝယ်လိုအားအကြံပြု NoGo- သို့မဟုတ် Stop-N235,36,47။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ပဋိပက္ခအခြေအနေများအောက်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ် NoGo- သို့မဟုတ် Stop-N2 အမှား-related အဆိုးမြင်စိတ်တွေအဖြစ်အလားတူမြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်ခန့်မှန်းအရင်းအမြစ်တည်နေရာပြနှင့် NoGo- သို့မဟုတ် Stop-N2 ကြောင်းအကြံပြုကိုတွေ့ထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်47။ တုံ့ပြန်မှုပဋိပက္ခမြင့်မားသည်ဌာန၏ထို့ကြောင့် NoGo- သို့မဟုတ် Stop-N2 အစိတ်အပိုင်းအခြေအနေများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ Go ကို / NoGo တာဝန် OCD လူနာလျှော့ချ NoGo-N2 သတင်းပို့ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်မပါဝင်ခဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ oddball ပါရာဒိုင်းပါဝင်သည်18,34 နှင့်, ထို့ပြင်လဲ့များတွင်အသုံးပြု SST နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးနိမ့်ပဋိပက္ခအခွအေနေလိုက်ပါသွား et al။ တိုးမြှင့ Stop-N2 လွှဲခွင်သတင်းပေးပို့ပေးသောလေ့လာမှု,36။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုအတွက် Go ကို / NoGo တာဝန်ကထုတ်လုပ်သည့်အလယ်အလတ်ပဋိပက္ခအခြေအနေအလှည့်၌, OCD နှင့် HC အုပ်စုများအကြားဆနျ့ကငျြဘမှုန်ဝါးခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါ OCD လူနာအတွက်အလယ်အလတ် NoGo-N2 လွှဲခွင်ရူးနှမ်းကြပေမည်။
အဆိုပါ Go ကို / NoGo တာဝန်စဉ်အတွင်းတစ်ခုတိုးလာ ER အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်ဤလေ့လာမှု၌, နှစ်ဦးစလုံး IGD နှင့် OCD သင်တန်းသားများ, တုံ့ပြန်မှုတားစီးအတွက်အမူအကျင့်လိုငွေပြမှုပြသခဲ့သည်။ သို့သော် NoGo လှုံ့ဆော်မှုမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုသိုထားသောဖို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ကွဲပြားခြားနားသော neurophysiological ဆက်စပ်မှုအကြံပြုခြင်း, ထိုအဖွဲ့များအကြားကွဲပြားပါတယ်။ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပျက်ကွက် Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံးထံမှဖြစ်ပေါ်နိုငျသျောလညျး compulsive လုပ်ရပ်များရပ်စဲအတွက်ပြဿနာတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, Impulse ၏လုပ်ငန်းစဉ်, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အပေါ်ပြုမူဖို့စိတ်သဘောထားမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်7,48။ အထူးသကျနော်တို့ OCD အုပ်စုသည်အတူတူပင် Go ကို / NoGo တာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း NoGo-N2 လွှဲခွင်တစ်ဦးဆွေမျိုးကျဆင်းခြင်းပြသသော်လည်းအဆိုပါတိုကျရိုကျ site ကိုမှာ NoGo-N2 လွှဲခွင်, အ IGD အုပ်စုတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Go ကို / NoGo တာဝန်များကိုသုံးပြီးယခင် ERP လေ့လာမှုများဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အားထုတ်မှုနဲ့ကွဲပြားခြားနားသော Go ကို / NoGo Paradigm အကြားတာဝန်အခက်အခဲများ၏ဒီဂရီအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများ၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရန်, NoGo-N2 လွှဲခွင် (အမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချ) ကိုဦးတည်ချက်နှင့်စပ်လျဉ်းကိုက်ညီမှုရလဒ်များကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ29,33,49။ ထို့ကြောင့် IGD နှင့် OCD အကြား NoGo-N2 လွှဲခွင်ထဲမှာအုပ်စုတစ်စုခြားနားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တူညီ Go ကို / NoGo တာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်း inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်သောပုဂ္ဂလဒိဋ္အားထုတ်မှုအတွက်အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားခြားနားမှုကကမကထပြုခဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု, ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာကန့်သတ်ချက်များစွာရှိတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် OCD လူနာများကိုအတင်းအကျပ်ရောဂါလက္ခဏာများဖြင့်စုဆောင်းခဲ့သော်လည်း၊ frontal site ရှိ NoGo-N2 amplitude သည် Y-BOCS မှရမှတ်များနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်အလားတူအခြကိုအသုံးမပြုဘဲ, OCD လူနာအတွက်တိုကျရိုကျ site ကိုမှာလျှော့ NoGo-N2 လွှဲခွင်ကိုတိုက်ရိုက် compulsivity တစ် neurophysiological ဆက်စပ်မှုရှိမရှိမရှင်းလင်းသည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင် IGD လူနာများစွာသည်ကုသမှုမခံယူကြဘဲသူတို့၏လေ့လာမှုသည်ယခင်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (IAT ရမှတ် <၆၀ ကိုဆိုလိုသည်) ပြင်းထန်မှုနည်းသည်။ ထို့အပြင်ဒီလေ့လာမှုမှာ OCD လူနာအတန်ငယ်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆေးဝါးအဆင့်အတန်းနှင့် comorbidities ထိန်းချုပ်ထား - ဘို့ ERPs ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်။ သူများသည်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအုပ်စုသုံးခုအကြား ERP ဆန့်ကျင်ဘက်လျှော့ချကြပေမည် သို့သော်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသော်လည်းရလဒ်များနေသမျှကာလပတ်လုံးသတိထားအနက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်အတိုင်း, အယူအဆထောက်ခံကြဘူး။ တတိယအနေဖြင့် NoGo-N60 အောင်းနေချိန်၏အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုသည်နှိုင်းယှဉ်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်ပြင်ဆင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အလယ်အလတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသခဲ့ပြီးမျိုးစုံစမ်းသပ်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်မှုသည်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်လက်တွေ့ထိရောက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိလက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအနက်ဖွင့်ရာတွင်သတိထားသင့်သည်။
ကျနော်တို့ Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံး၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦး Go ကို / NoGo ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီး, IGD နှင့် OCD အတွက်အလုပ်မဖြစ်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ကွဲပြားခြားနားသော neurophysiological ဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ငှါရှာကြံလေ၏။ အမူအကျင့်ဒေတာ IGD နှင့် OCD နှစ်ဦးစလုံးလူနာတုံ့ပြန်မှုတားစီးအတွက်အခက်အခဲရှိခဲ့ပါတယ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ERP ရလဒ်များကိုစွဲပြင်းထန်မှုများနှင့် Impulse ၏ဒီဂရီနှင့်အညီ, IGD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အစောပိုင်းအဆင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပိုပြီးဝယ်လိုအားခဲ့သရုပ်ပြခဲ့သည်။ OCD နှင့်အတူလူနာမှာ, တုံ့ပြန်မှုတားစီးအတွက်လိုငွေပြမှု compulsive အပြုအမူများ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သောတိုကျရိုကျ cortex အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည်နှောင့်နှေး NoGo-N2 အောင်းနေချိန် IGD လူနာရို Impulse တစ် biomarker ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်, လျှော့ချ NoGo-N2 လွှဲခွင် compulsive နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် IGD နှိုင်းယှဉ် OCD အတွက် differential ကို neurophysiological အင်္ဂါရပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။ OCD နှိုင်းယှဉ် IGD ၏တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ပိုကောင်းတော်ပါတယ်ပိုပြီးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနမူနာများနှင့်တစ်ဦး Go ကို / NoGo ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူအနာဂတ်လေ့လာမှုများ, လက်ရှိလေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့နှင့်အတည်ပြုပေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။